गोर्खाको बास्तबिकता – Samachar Pati
मिन बहादुर पण्डित । नेपाल जस्तै दार्जलिङ्ग पनि नेपाली मुलका नेपाली भासी बसोबास गर्ने ठाउ हो । अहिले जन्मेका दुइचार जना दार्जिलिङ्गे चीचिंडा फेसबुकमा कराउदैमा केहि फरक पर्दैन । ब्रिटिशले हाम्रो सिमा छुट्याई दिएका मात्र हुन् । लामो समय देखि भारतले सासन गरेपछि भारतीय लाग्नु स्वभाबिक पनि हो, तर पनि बहुसंख्यक दार्जलिङ्ग बासि भारतीय भन्दा नेपाली हुनुमा गर्ब गर्छन र गोर्खाली हुनुमा गर्ब गर्छन । नत्र कशैले पनि अर्काको देशको पोसाक दौरा सुरुवाल र टोपी लगाउदैन ।
सुबास घिशिंगले त राजा बिरेन्द्रलाइ हामि नेपाली राजाकै रैती हौ सम्म भनेका थिए रे । त्यशैले गोर्खाल्याण्डको बिबादमा गरिबको अपमान नगरौ, किनकि गरिबी नेपालमा पनि छ, भारतमा पनि छ । चोरेर पो खानु हुदैन, काम गरेर खान हुन्छ, काम सानो ठुलो हुदैन, सबैले कामलाइ इज्जत गर्नु पर्छ । नेपाली र दार्जेलिङ्ग बासि बीच बिबाद ल्याउन खोज्ने तत्व देखि होसियार !
दार्जेलिङ्गमा ३ खाले मान्छे बस्छन । एक नेपाल तिर मिसिन चाहने, दुइ भारतमै रहने , तिन छुट्टै गोर्खाल्याण्डमा रहने । कता बस्न चाहनेहरुको बाहुल्यता छ, त्यो जनमत पछि मात्र थाहा हुने कुरा हो । नेपाल जस्तो गरिब देश सीत मिसिन्नौ भने भनेर उनीहरुलाई गालि गर्नुको सट्टा हामीले लोव लाग्दो नेपाल बनाउ, अनि पो उनीहरुलाई मिसिन आऊ आऊ लाग्नेछ । कंगाल नेपाल बनाएको छ, ६० लाख युबा देशमा रोजगार नभएर बिदेसीएका छन्, अनि त्यस्तो ददिद्र देशमा को आउछ मिसिन ? दार्जलिङ्ग नेपाल तिर मिसियो भनेत अहिले भारत हुदा ७० हजारमा पाउने बाइक नेपाल भए पछि २ लाख पर्ने छ । अहिले २ लाखमा पाउने नानो गाडी ८ लाख पर्ने छ । यस्तो स्थितिमा को आउछ मिसिन ?
नेपालीहरु दार्जलिङ्गमा मात्र होइन सिक्किम, भुटान र बर्मा सम्म पुगेका थिए । पृथी नारायण साहले सीमाको रेख देख गर्न नेपालीहरुलाई बर्मामा पठाएको कुरा इतिहासमा पनि लेखिएको छ, र बर्माका नेपाली मुलका मान्छेको मुख बाट पनि सुन्न पाहिन्छ । अर्को कुरा पृथिबी नारायण साहको लबाज वा अर्ति उपदेश सुन्दा उनि गोर्खाको रैथाने जस्तो लाग्दैन । ”घुस लिन्या र दिना दुवै अपराधि हुन् , यिनको सबर्स्व हरण गर्या पनि पाप लाग्न्या छैन” यो खालको भासा अहिले पनि पश्चिम नेपाल तिर बोलिन्छ ।
त्यशैले पृथी नारायण साहको पुर्खा पश्चिम नेपाल तिर बाट आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर पृथिबी नारायण साहको गोर्खाको सेनाले नेपाल एकीकरण गर्यो, त्यशैले जो नेपाली गोर्खाको सेनामा जागिर खान भर्ना भए ति सबै गोर्खाली भए अनि बिस्तारै गोर्खाली कहलिए । अंग्रेज संग पनि गोरखाकै सेनाले लडेको हुनाले गोर्खाली भनेर ब्रिटिशले चिन्न थाले । पछि गोर्खाको बहादुरी देखेर गोर्खालीहरुलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीले सेनामा भर्ति गर्यो र संसारका धेरै ठाउमा लड्न लिएर गयो । पहिलो र दोश्रो बिश्व युद्धमा धेरै गोर्खालीहरु लडे ।
संसारमा जब देशहरु बन्ने क्रममा थियो, नेपालमै पनि २२ से र चौबिसे राज्य थिए, ति छोटे राज्यका बासिन्दा पृथिबी नारायण साहाले एकीकरण गरेपछि मात्र नेपाली भएका हुन् । भारतमा त् ४०० भन्दा बडी ससाना राज्य थिए, ति सबैलाई मिलाएर ब्रिटिशले इस्ट इन्डिया कम्पनि बनाएको हो । बास्तबमा त्यो बेला भारतको देशको कुनै हैसियत थिएन, त्यो बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनि नै अहिलेको बिशाल भारत हो, पाकिस्थान र बंगलादेश पनि पछि बनेका हुन् ।
जन्मकै कुरा गर्ने भने भारतमा जन्मेका मुसरफ पाकिस्थिनी हुनुमा गर्ब गर्छन । पाकिस्थानमा जन्मेका मनमोहन सिङ्ग भारतीय प्रधानमन्त्रि बने । केन्याका ओबामा अमेरिकाका रास्टपति बने । संसारमा यस्ता सयौ उदाहरणहरु छन् , जो एउटा देशमा जन्मेर अर्को देशको रास्ट प्रमुख भए ।
भासाकै कुरा गर्ने हो भने बंगाली भासा बंगलादेशमा पनि बोलिन्छ, पश्चिम बंगालमा पनि बोलिन्छ । अरबी भासा अरब देश बाहेकका देशमा पनि राष्टिय भाषाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । इन्ग्लिश भासा बेलाएत बाहेक युरोपका अरु देशमा बोलीन्न तर अमेरिका र दक्षिण अफ्रिकामा बोलिन्छ । मरिससमा हिन्दि बोलिन्छ ।
सबै नेपालीको पुर्खा पक्कै पनि गोर्खाबाट मात्र आएका होइनन, त्यशैले हामि सबै नेपाली कसरि गोर्खाली भयौ ? तर नेपालीको अर्को नाम वा पर्यायबाची सब्द नै गोर्खाली भनेर संसार भरि स्थापित भएको छ । नेपाली भन्नु र गोर्खाली भन्नु उस्तै उस्तै हो । नेपाली पनि कोहि आर्य छन्, कोहि मंगोलियन छन् तर हामि नेपाल भित्र बस्ने हुनाले नेपाली वा गोर्खाली कहलियौ ।
त्यशैले हाम्रो भासा संस्कृति र भेस भूसा अंगालेका अनि ब्रिटिशले गर्दा हामि संग परापुर्ब काल देखि छुट्टीएर बस्न बाध्य भएका नेपाली मुलका दार्जलिङ्ग बासीलाई गोर्खाल्याण्ड सब्द प्रयोग गर्ने पुरा अधिकार छ । गोर्खाल्याण्ड सब्द नेपालीलाइ प्यारो छ भने ढाका टोपी लगाएर हिड अनि दौरा सुरुवाललाइ नबिर्स । हामीले लगाउन छोडेको दौरासुरुवाल दार्जलिङ्ग बासीले बचाई राखेका छन् ।
नेपाली भासा साहित्त्यमा दर्जेलिंग बासीको ठुलो योगदान छ । अर्को कुरा भारत स्वत्रन्त्र हुदा राणाहरुले चाएका भए दार्जलिङ्ग सजिलै फिर्ता लिन सक्थे, तर लिन चाहेनन् । किनकि त्यो बेला राणाहरुले नेपालीलाई पडन लेख्न दिदैनन थिए । जनता बाठा भए आफ्नो सासन सत्ता गुम्छ भन्ने डर थियो । र दार्जिलिङ्ग नेपालले फिर्ता लिदा समाल्न सकिन्न र आफ्नो सत्ता गुम्छ भन्ने ठुलो डर राणाहरुलाई थियो , किनकि राणाहरुको नजरमा त्याहाका मान्छे पढेलेखेका र बाठा थिए ।
भारतका हिन्दुले पनि बंगाली बोल्छन, बंगलादेशका मुस्लिमले पनि बंगाली बोल्छन । हिन्दु मन्दिरको नाम ढाकेश्वोर बाट (बंगलादेशको राजधानी) ढाका सब्द बनेको हो । त्यशैले भाषा संस्कृति कुनै देश बिसेस वा जाति बिसेषको मात्र हुन् सक्दैन । त्यसकारण २ चार जनाले भन्दैमा हाम्रो समन्ध बिगार्नु हुदैन, । दार्जलिङ्ग नेपाल तिर मिसिन चाहे पनि बलियो र धुर्त भारतले त्यो कदापि हुन् दिदैन भन्ने दार्जलिङ्ग बासीले राम्ररी बुझेका छन् । गोर्खाल्याण्ड नामको अलग प्रान्त्र बनाउने दार्जलिङ्ग बासीको चाहना हो । त्यशैले गोर्खाल्याण्ड सब्द प्रयोग गर, मज्जाले गर ।
घण्टौ घण्टा जाममा पर्दा हाम्रो क्षतिपुर्ती कसले तिर्छ ?
“सबै नेपालीले बर्षभरी खाने धान उत्पादन हाेस”
नेपालमा एउटा यस्तो पनि रुख छ